Imfihlo enkulu yendlu eyodwa encane
Ngaphandle kwazo zonke izindlu ezinkulu ezikhona ezikhona, iningi lethu lihlala ku-"dvuhshkah" noma "odnushki" ejwayelekile, ubukhulu obukude nemibono yethu mayelana nezindlu ezifanele. Kuyimpumelelo enkulu ukukwazi ukubeka zonke izinto zakho efulethini elinjalo, futhi ukuklama nokududuzeka kuya ngemuva. Kodwa ochwepheshe banokuhlangenwe nakho okubalulekile okuzosiza ukwandisa noma yimuphi isikhala. Kungani ungathathi imibono yabo ekusebenzeni?
Kuyaziwa ukuthi ubukhulu obuncane bendlu ejwayelekile buyancipha izikhathi eziningi, kufanelekile ukuwugcwalisa ngefenisha, izinto eziwusizo nezingenamsebenzi. Ngakho-ke, uma ufuna ukuzihlanza isikhala esincane, susa okungenamsoco. Ngaphandle kokuzisola, ulahle izinto eziphukile noma izinto ongazange uzisebenzise isikhathi eside futhi ungahambi. Zonke lezi amashalofu, amabhokisi, ama-banquettes, amawashi amandulo aphukile, amarekhodi we-tape, izintaba zezingubo ezingaphelelwa yisikhathi - ziyizindawo ezingaphandle kwekhaya lakho.
Umthetho wegolide okumelwe ulandelwe: ususe yonke into engakaze isetshenziswe ngaphezu konyaka.
Shintsha kube ngcono.
Bheka indlu yakho ehlanzekile. Yini engalungile ngakho? Izithunzi emagumbini, ukufakwa okuphansi, kubonakala sengathi akukho lutho olushintshile. Kuzodingeka uchithe amandla nesikhathi sokulungisa okuncane. Ukuqala, shintsha iphephadonga noma umbala wepende ezindongeni. Kumele kube lula, kuphela ngale ndlela ongakwazi ukwandisa isikhala esincane, okungenani sibukeke. Ngesikhathi esifanayo kufanelekile ukucabanga ngomsebenzi, okusho ukuthi umbala omhlophe obomvu ngeke ube kuhle. Lapha ukushayela kungaba mhlophe, njengeqhwa elisanda kuvele - lokhu kuzokwenza umuzwa wokuthi uphakeme kakhulu.
Ukukhanya kusiza ukwenza zonke izindlu zikhululekile. Ngakho-ke, susa abalindi abanzima kusuka emafasiteleni, banikeze okuthandayo ekukhanyeni okulula.
Ngakho-ke, uzothola amakamelo aqhakazile avela kakhulu kunalawo angaphambili, nakuba ubukhulu bangempela bendlu abuzange buguqulwe nganoma iyiphi indlela.
Kodwa emafulethini amaningi ukuhleleka kubi kakhulu futhi amakamelo amancane kakhulu kangangokuthi akukho imibala ezosiza ukuyenza ibe mkhulu. Uma kunjalo, izibuko ezinkulu zizokusiza. Uma ubahlela kahle, amakamelo akho azokhula ngokwanele.
Ukulungisa kuyisizathu esihle sokubheka okubalulekile ifenisha onayo. Ingabe kunzima kakhulu isikhala esincane kangaka? Manje ukukhethwa kwefenisha esebenzayo, ehlanganisiwe nehle kakhulu kukhulu kakhulu. Unganqabela umbhede omkhulu ngokuqondene nesofthiwe yokubumba, okuvela ezindaweni eziningi zokubeka izindlu kanye namashalofu - kuzothathwa indawo yesikhungo sekhompiyutha esinezikhungo zamashalofu nezitshalo ezilula. Kuzokwakhiwa isisombululo esihle-ifenisha, esithatha isikhala esincane.
Uma kungenakho ukukhetha, kungcono ukwenza indawo yokugeza - ngakho unendawo yomshini wokuwasha.
Ikhishi liyindawo enhle kuyo wonke umnikazi wendawo yokuhlala encane. Kubonakala sengathi yenzelwe ukuze kungabikho lutho olungahlala kulo. Kodwa ngisho nasesimweni umuntu angathola indlela efanelekile yokuphuma. Isibonelo, susa isiqandisisi singene e-pantry, khetha isethi yekhishi enezintambo ezivulekile. Abanye bakhetha ithebula lokunamathisa nezihlalo.
Izindlu ezindizeni ezincane zingcono ukufaka ukukhanya. Isixazululo esihle: izibuko ezinkulu eminyango noma iminyango yokugibela.
Udinga ukulinganisela indlu ngokulinganisela. Isithombe esisodwa esihle kunazo zonke kunamancane amancane. Kungcono ama-sconces ambalwa ezindaweni ezahlukene zekamelo kunomngane okhululekile ngaphansi kwelayili. Ama-vases, napkins, amafayili - konke lokhu kufanele kushiywe kuze kube yilapho uthola ikhaya, ubukhulu balo obuzokuvumela ukugqamisa i-trinket ngayinye. Umhlobiso omuhle kakhulu ukuthi ukhona izimbali eziphilayo ezimbizeni, ongazakhela izikrini zangempela ezizosiza ukudiliza isikhala ngisho nasendlini encane kunazo zonke.
Njengoba ungabona, azikho izindlela eziningi zokushintsha ikhaya lakho libe ngcono. Kuyinto nje yokubonisa umcabango omncane, ungayeki ngaphambi kwezinkinga futhi uphathe izinguquko ngokumomotheka, njengoba kuvela ukuthi akukho lutho olungenakwenzeka.
Umlando wokukhonza ithebula lokugubha
Imfashini yendwangu yokulala
Indlela yokunakekela ifenisha yokhuni
Amashalofu Wasezindaweni Ephakathi
Indlela yokubhekana nokukhuluphala ezinganeni
Ithonya likotshwala nogwayi ngesikhathi sokukhulelwa, ukubeletha kanye nesisu
U-Anna Kournikova wayesolakala ukuthi u-anorexia, ividiyo
Ukucindezeleka ekuphileni komfazi wesimanje
Kungani umyeni wami engikhathaza njalo?
Amaqiniso athakazelisayo kakhulu mayelana nobulili
Roma Bilyk, biography
Ubisi oluncibilikisiwe ku-multivariate
Indlela yokuqoqa kanye nosawoti amakhowe?
U-Evgeni Plushenko ngeke ahambe kuma-Olympic-2018
Isaladi le-Feta nge utamatisi we-cherry